Salaamanews » Maalinta “Valentine’s Day” Maxay tahay? & Diinta Islaamku ma ogoshahay Maalintaas?
Home » Islam, Warar Maalinta “Valentine’s Day” Maxay tahay? & Diinta Islaamku ma ogoshahay Maalintaas? Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 13th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Culimada Soomaaliyeed oo Cadeysay Xukunka Dadka Aflagaadeeyay Nabigeenna Mohamed (NNKH)Muqdisho: Xarakada islaamiga ah ee al-Islaax oo shir ay qabatay dib ugu midowdayDaawo: “Nafsadiinna xisaabiya” Sheekh Maxamed Cabdi UmalSoomaalida oo dhalleeceeyay xarigga ay al-Shabaab ee macalimiinta Qur’aankaShir diimeed Tansaaniya ka mamnuucay hadallada nacaybka diimaha dhaliya
(Salaamanews)-Maxaad ka taqaan maalinta Jaceylka Aduunka? Diinta Islaamkuse ma ogoshahay Maalinta in la weyneeyo oo loo dabaal dago? Waxaa naxdin ah in maalinta taarikhdu tahay 14 February oo ku beegan Maalinta Khamiista ah ay dad Muslimiin ah ay xusayaan Baadari Christan ah geeridiisa iyo Wax ay caabudi jireen Roman kii hore!.
Waxaa qortay Sacdia Mohamed Nor
Tags: islam, warar « Qoraalkii HoreDowladda oo ka tacsiyaysay geerida Sheekh Xeefoow oo ku dhintay Muqdisho	Qoraalka Xiga »Irish troops could be training in Mogadishu within months	Halkan Hoose ku Jawaab